29inch koronto caawinta buurta | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn Products baaskiil koronto baaskiilka buurta 29 * 2.35 inji oo koronto ku caawisa baaskiilka buuriga loogu talagalay dadka waaweyn A6AH26
Mooto: 36V 250W / 350W Hub Moto
Bandhiga: LCD3 Screen
Xadhig: Saxanka hore iyo gadaal 160mm
Turo: Dibedda 29 * 2.35 inji
Joojinta: Cayrinta Cirifka hore
Load Max: 120-150kgs
29 * 2.35 inji oo koronto ku caawinaysa baaskiilka buuriga dadka waaweyn
29 injirta injirta korontada ku shaqeeya baaskiilka buurku waxay ku habboon yihiin dadka dhaadheer, waxaad iyaga ka dhigtaa inay fuushan yihiin raaxo badan. Moodada qarsoon ee casriga ah ee loo yaqaan 'wookeega' baaskiil buurta fiidiyowga ah ayaa ka dhigaya muuqaalka dhan ee baaskiilka buurta korantada la mid ah baaskiilka buurta ee caadiga ah. Xitaa ka badan, waxaa jira 6 Heerka Caawimaadda Pedal (laga bilaabo 0 illaa 5 heerar) si aad ula qabsato xawaaraha kala duwan ee baahidaada adoo ku socda wadada ama kor u fuulaya.
250W / 350W mooto aan lahayn ayaa ka badan waxtarka 80 boqolkiiba waxna ka hooseeya 60 Db sanqadha, ku raaxeyso khibrad fuulitaan xasilloon oo aan riyo ahayn. Dhaqdhaqaaqa xawaaraha sare wuxuu ku siin karaa baaskiil ilaa 25km / h-30km / saacadii. Gawaarida baaskiilkaaga waxay leeyihiin laba waddo oo lagu fuuli karo - sida baaskiilka caadiga ah iyo ku wadida korantada korantada oo xawaare ku socota.
Naqshadeynta bateriga qarsoon waxay ka dhigeysaa baaskiil caawinta korantada guud ahaan muuqaal ahaan inay muuqato. Waxaa ku rakiban batrool 36v 10ah lithium ah oo koronto sida, fuulista 40-60km ma ahan dhibaato. Shaqada laga saari karo ayaa sidaas u habboon, ka saar batteriga si fudud oo u qaad inuu kugu dallaco meel kasta (guriga ama xafiiska). Kaliya 5-6 saacadood ayaa ku dhammeyn kara dacwad buuxda iyadoo laga qaadayo 42V 2A xeedho la soo diray.
Soo bandhigida LCD-Multi-function-ka ah waxay muujin kartaa caawinta korantada ee baaskiilka Masaafada, Masaafada, Heerkulka, Awoodda batteriga, Tamarta Mootada, Xawaaraha Max'd iwm Iyada oo naqshadeynta biyuhu ay aad u fiican tahay waxay sidoo kale sameyneysaa shaqo fiican roobka. Macluumaad kasta oo baaskiil koronto ah waad ku garan kartaa muujinta.
Baaskiil caawinta Eletric waxay isticmaashaa 29 ″ * 2.35 Taayirka baaskiilka buuraha, kaas oo ah giraangir xajmi weyn iyo qaabab kala duwan oo taayirada taayirrada kala duwan naqshadeynta kordhinta khilaaf si loo hagaajiyo xajinta wadada. Raad raac buur, waddo magaalo, waddada quruurux ama waddada wasakhda ah, si fudud ayey ula qabsan kartaa.
Haddii aad xiisaynayso baaskiil koronto oo buuro badan, booqo 48V baaskiil montainer ah, iibka kulul buurta e-bike, 350W baaskiil koronto oo casri ah, 27.5-inch bafang buur ebike.
Tags:korontada ku shaqeeya baaskiilka buur baaskiil koronto oo loogu talagalay dadka waaweyn
Ka hor: Joojinta buuxda ee fiilada korantada mashiinka isboortiga A6AH26-SM
Next: Baaskiil kaarboon koronto koronto 26-inji oo isku dhafan A6CB26M